i-waterproof ye-lapprood yelaptop - Zone
i-waterproof ye-lapprood yelaptop
Ukho kwindawo efanelekileyo i-waterproof ye-lapprood yelaptop.Okwangoku sele uyazi ukuba, nantoni na oyikhangelayo, uqinisekile ukuyifumana Zone.siqinisekisa ukuba ilapha Zone.
Imveliso ye-Shenzhen Yomdlalo Com., I-LTD inenkqubo yenkonzo yesandi kwintengiso yehlabathi..
Sijonge ukubonelela ngomgangatho ophezulu i-waterproof ye-lapprood yelaptop.kubathengi bethu bexesha elide kwaye siya kusebenzisana ngokubonakalayo nabathengi bethu ukubonelela ngezisombululo ezifanelekileyo kunye neendleko zeendleko.
Indawo ibaluleke kakhulu kwi-Oct. 8 ukuya kwi-Oct. 10, imimandla ethathe inxaxheba kwi-Shenzhen I-Incbe-Comece-Commerce Rins. Umboneleli, 8. Ishishini lokuqhuba isikhokelo: Imidlalo yeNdawo ijolise ekwakheni inkqubo yeshishini emigangathweni, kwaye iyaqonda imeko yeshishini, njengokuhlonishwa kwemvumelwano yomoya, imfihlo yabathengi, i-IP, kunye nezinye izinto zabucala njl.njl.Umboniso ubonelela ngelinye iqonga leminye iqonga labathengisi behlabathi le-E-Commerce Rists. Njengowona mthengisi wawuthandayo we-Amanzi ye-Amastroof ye-Amanziof Pobroof Points, iMimandla kufuneka ithathe inxaxheba kulo mboniso. Ngexesha lomboniso, iinjineli zendawo yemimandla kunye nabaqulunqiweyo zimi kwingxaki yokuzimela kwabathengi, kwaye zibeka phambili imibono yoyilo yangaphambili kunye nezisombululo zoyilo zangaphambili kunye nezisombululo zeengcamango zabathengi kunye nobuchule beemveliso. Ngenxa yentshukumo yeqela eliqeqeshelweyo, kukho abathengi be-odom ngqo kuloo ndawo.